I-Check Safety Checker
Indlela yokusebenzisa isandiso
Faka isandiso se-Chrome
➥ Yiya ku-URL ⤓ Download
Le URL iphephile!
Hlola enye i-URL
I-Malware ne-phishing checker.
Leli thuluzi lokuvikela elakhiwe ukukhomba amawebhusayithi angaphephile kuwo wonke iwebhu futhi wazise abasebenzisi bokulimala. Sithemba ukugqugquzela inqubekela phambili ekubhekeni kwewebhu ephephile nephephile.
Lawa mawebhusayithi aqukethe ikhodi efaka isofthiwe engalungile kumakholi wezivakashi, noma ngabe umsebenzisi ucabanga ukuthi alanda isofthiwe esemthethweni noma ngaphandle kolwazi lomsebenzisi. Abaqaphi bangasebenzisa le software ukuze bathathe futhi basakaze abasebenzisi ulwazi oluyimfihlo noma olubucayi. Ubuchwepheshe bethu bokuphequlula okuphephile futhi buhlola futhi buhlaziye iwebhu ukukhomba amawebhusayithi angahle akhonjwe.
Lawa mawebhusayithi enza sengathi asemthethweni ukuze akwazi ukukhohlisa abasebenzisi ukuthayipha ngamagama abo abasebenzisi namaphasiwedi noma ukwabelana ngolunye ulwazi oluyimfihlo. Amakhasi eWebhu azenza amawebhusayithi asemthethweni ebhange noma izitolo ze-intanethi izibonelo ezijwayelekile zezingosi zokuphanga.
Sithola kanjani i-malware
I-malware yegama ihlanganisa inqwaba yesofthiwe enonya eyenzelwe ukulimaza. Izingosi ezithintekile zifaka i-malware kumshini womsebenzisi ukweba ulwazi oluyimfihlo noma ukulawula umshini womsebenzisi nokuhlasela amanye amakhompyutha. Ngezinye izikhathi abasebenzisi balanda le malware ngoba bacabanga ukuthi bafaka isofthiwe ephephile futhi abazi ukuthi ukuziphatha okubi. Ngezinye izikhathi, i-malware ilandwa ngaphandle kolwazi lwabo. Izinhlobo ezijwayelekile ze-malware zihlanganisa ransomware, spyware, amagciwane, izimpethu, namahhashi iTrojan.
I-Malware ingafihla ezindaweni eziningi, futhi kungaba nzima ngisho nochwepheshe ukuthola ukuthi iwebhusayithi yabo isulelekile. Ukuze sithole amasayithi avunyelwe, siskena iwebhu bese sisebenzisa imishini ebonakalayo ukuze sihlaziye amasayithi lapho sitholile khona izimpawu ezibonisa ukuthi isayithi liye lahlekelwa.
Lawa mawebhusayithi abaduni abaye bamisa ukuze babambe ngokuzithandela futhi basakaze isofthiwe enonya. Lawa masayithi asebenzisa ngokuqondile isiphequluli noma aqukethe isofthiwe eyingozi evame ukubonisa ukuziphatha okubi. Ubuchwepheshe bethu bubona ukuthi lezi ziphathamandla zihlukanisa lezi zingosi njengamasayithi okuhlasela.
Lawa mawebhusayithi asemthethweni aphikisiwe ukufaka okuqukethwe okuvela kuwo, noma ukuqondisa abasebenzisi, amasayithi angasebenzisa iziphequluli zawo. Isibonelo, ikhasi lesayithi lingahle lihlehliswe ukufaka ikhodi eqondisa umsebenzisi kwisayithi lokuhlaselwa.
Mayelana TOS Inqubomgomo yobumfihlo Xhumana nathi Sitemap Facebook